DVD “Tafaray samy tia” : hampahafantarin’i Dadah sy Fafah | NewsMada
DVD “Tafaray samy tia” : hampahafantarin’i Dadah sy Fafah
Par Taratra sur 06/09/2016
Maro ireo nahatsiaro, satria niavaka ny nankalazana ny fetin’ny mpifankatia, ho an’ireo nisafidy ny tetsy amin’ny CCEsca Antanimena, ny 14 febroary lasa teo. Tamin’io tokoa mantsy no nitondran’i Dadah sy i Fafah an-tsehatra ny “Tafaray samy tia”, fampisehoana iray anisan’ny nanamarika indray ny fampiaraham-peon’ireto andrin’ny tarika Mahaleo ireto.
Fantatra fa noraisina an-tsary, ka navoaka ho DVD ny fampisehoana, mba hozaraina amin’ireo mpankafy. Nahazo tombony voalohany tamin’izany ny tany Frantsa, izay nandray an’i Dadah sy Fafah tamina toerana fanaovana fampisehoana maro. Tany mantsy no naparitaka voalohany ity vokatra ity.
Fantatra kosa izao, fa hisy ny fampisehoana fampahafantarana ny DVD, izay hotontosaina ny zoma 30 septambra ho avy izao, etsy amin’ny Carlton Anosy. Natao ihany koa ho an’ireo mpankafy mbola tsy afa-po na tsy nahita ny fampisehoana voalohany tamin’ny volana febroary izy io. Hanampy an’i Dadah sy i Fafah mandritra izany i Mbola Talenta, mpitendry nanaraka azy ireo tany amin’ny fihodinana tany ivelany. Hisy ihany koa ny vahiny hafa, raha ny nambaran’ny mpikarakara.
Taratry ny kanto 30/10/2020
“Rap ho an’ny taniko”: hitondra ny rap mitety vanim-potoana ny Animalk 30/10/2020
“Tafan-gilita”: hampiaraka talenta ry Mbola, i Nini, i Jovin ary i Hoby 30/10/2020
Lakandranon’i Dabara: miankina amin’ny velaran-tany voatondraka ny vola miditra 30/10/2020
Tahan’ny fahantrana: anatiny ny fahasalamana sy ny fanabeazana 30/10/2020